I-China Level 2, 240 volt imoto kagesi (EV) ekhokhisa isiteshi samashaji Ukwakha kanye neFektri | I-Joint Tech
Udonga lufakwe esiteshini seshaja esingu-7.6 KW Level 2 AC EV
Isizukulwane semoto kagesi sesifikile. Ngabe inkampani yakho ikulungele? Ngesiteshi sokushaja se-JNT-EVC10 Series, uzoba nesisombululo esiphelele se-plug-and-play esiguquguqukayo ukwamukela izivakashi ezisendaweni kanye nemikhumbi yakho yezimoto zikagesi.
Iziteshi zokushaja izimoto ze-JNT-EVC10 zakhiwe zilungele inethiwekhi ukuphathwa kwangemuva futhi ziza ngokujwayelekile ngabafundi bekhadi le-RFID lokuhlonza umsebenzisi. Ngomklamo we-ergonomic oguquguqukayo, ungabekwa odongeni noma enyaweni ngenkathi unikezela ngecala lokushaja elihlukile. I-JNT-EVC10 ikuvumela ukuthi ungeze kalula ukushaja kwezimoto zikagesi njengenzuzo eyengeziwe ekwamukeleni izihambi, emahhovisi, komasipala nakwezinye izindawo eziningi zokuhweba.
I-LCD enkulu ukubonisa yonke idatha yemoto esiteshini sokushaja ngesikhathi sokushaja. Uyabona isimo sokushaja, kufaka phakathi i-current, voltage kanye nethempelesha. Izikulufo ziyanela ebhokisini ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuwa kwesikrini. Ikhebula le-18ft noma i-25ft lishiya isikhala esanele phakathi kwemoto yakho nesiteshi sokushaja.
Langaphambilini DC Ukushaja CE60KW
Olandelayo: Uhlobo lwe-Wallbox 2 16A 7kw One Phase EV Charging Point EV Ishaja ye-Electric Vehicle Smart Charging
Izindleko Zeshaja Yasekhaya Yezimoto Zikagesi
Amaphuzu Wokushaja i-Ecar
Izinkampani Zokushaja Izimoto Zikagesi
Ishaja yasekhaya yemoto kagesi
Ikhaya Ev Ukushaja Iphuzu
Solar Electric Car Ishaja
Ukushaja Imoto yeSolar Panel
Uhlobo lwe-Wallbox 2 16A 7kw One Phase EV Ukushaja Po ...